Uchwepheshe we-Semalt: I-Google Algorithm Yokusesha Kungaba Ukuphoqa Abantu Ugaxekile
Wonke ochwepheshe be-SEO, ummemezeli, noma umlobi wokuqukethwe uyazi ukuthi ukwakha isixhumanisi kungenye yezinto ezibalulekile ezithinta isayithi kwisimo se-search engine . I-SEO idinga izixhumanisi, futhi abantu abasebenzisana ne-SEO badinga nabo.
Kodwa izinjini, ikakhulukazi i-Google, zibonakala zidinga ukuxhumana kakhulu futhi lokhu kubangela umonakalo omkhulu kunokuhle. Ama-algorithms wokusesha we-Google asebenzisa izixhumanisi njenge-metric ehambisanayo yokubeka amasayithi. Lokhu kuye kwenza isihloko sokwakha isixhumanisi sivelele emaforamu ahlukahlukene - elancyl creme vergeture avis. Abalobi, abablogi be-Blogger kanye nabamemezeli bahlale behlola izindlela ezintsha zokuthola izixhumanisi ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwabo kuyindlela engcono yokufinyelela izethameli zabo.
UMichael Brown, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uchaza ukuthi isisindo esinikezwe izixhumanisi lapho kusungulwa amasayithi kubonakala sengathi iphoqa amanye amamethrikhi asezingeni elibaluleke nakakhulu. Kusobala manje ukuthi ukugcizelelwa kweGoogle kokuqukethwe kwekhwalithi, igunya lesayithi, nokuthonya njengezici eziyinhloko zesimo sesayithi ziyizicelo nje. Ukuhlelwa kwayo kokuhlelwa kwemigomo kushicilela ngokuphelele lezi zici ngokuvumelana nezixhumanisi.
Ngenxa yalokho, abakhi besixhumanisi basuke bekhathazeka ukuhlola izixhumanisi esikhundleni sokutshala izimali ekudaleni okuqukethwe kwekhwalithi enethonya nokugunyazwa..
Abathengi bahlupheka kakhulu kule mboni. Esikhundleni sokuthola okuqukethwe okuwusizo njengoba bebengalindela kusuka kumasayithi avela ekhasini lokuqala lemiphumela yokusesha injini, lokho abakuthola kungokuqukethwe okungaqondakali okusetshenziselwe ukusebenzisa izixhumanisi ukuze zibe ngaphezulu.
Kunengqondo ukuthi ukugcizelela kakhulu kwe-Google kuma-link kuye kwasusa ukuthuthukiswa kombono wokuthi okuningi kunoma yini etholakalayo kuwebhu ingasetshenziswa ngumdali. Yilokho ukucabanga okuye kwaholela abantu abaningi kuzixhumanisi zogaxekile ngezinethemba lokuthi okuqukethwe kwabo kuzobekwa okuphezulu.
Uma izinjini zokusesha zibeka isisindo esincane kumalinki uma zithuthukisa izinhlelo zabo zokusesha, wonke umdali wokuqukethwe anganamathela ezisekelweni ze-SEO ephilayo. Bazokhathazeka kakhulu ngokuklama amasayithi abo nokudala okuqukethwe kwabo kwikhwalithi engcono kakhulu ukuze abathengi bathole lokho abakufunayo kulawo masayithi. Lokhu kuzokwenza abathengi bathemba amasayithi anjalo ngaphezulu. Yiqiniso, akekho othanda ukukhohlwa mayelana nokwakhiwa kwesixhumanisi. Kodwa emva kokunakekela izici ze-SEO ezisemqoka, akukho okungaba lula kunokuheha izixhumanisi zekhwalithi kusayithi. Ngamanye amazwi, isayithi lingathandwa ngoba liyabonakala.
Njengoba ikhona manje, i-Google ivumela amasayithi ukuthi asebenzise izixhumanisi ukuphoqa abantu ukuba bathande. Ngokudabukisayo, ngisho nezindawo ezinkulu zenza le nto engamukeleki, kanti omunye ushiywe ukubuza ukuthi kungani i-Google ivumela ukuba bahambe nayo.
Uma inkinga yezixhumanisi ze-spammy ukuthola isisombululo, i-Google kufanele ibe phakathi nendawo. Kumele ukuyeke ukunikeza izixhumanisi ezinzima kakhulu ku-algorithm yayo yesimo futhi kugxile ezintweni ezibaluleke kakhulu kokuqukethwe kwe-intanethi: okuhlukile, usizo, ithonya, negunya. Izinjini zokusesha kufanele zenze izinga lokudlala emhlabathini - zivumela amasayithi ukuba ancintisane ngokusezingeni eliphezulu lokuqukethwe kwawo nokuthi azinakekele kanjani izidingo zabathengi. Ngaphandle kokuthi lokhu kwenzeke, abantu abaningi bazothuthukisa umbono wokuthi izixhumanisi zingenhla yezinga le-SERP futhi lokho kuzongandisa kuphela inani lezinto ezingenalusizo kuwebhu, njengoba sekubonwe kakade.